मिचेल र समान्था पनि प्रचण्डपत्नी सिताझै बेसरम ! | KTM Khabar
मिचेल र समान्था पनि प्रचण्डपत्नी सिताझै बेसरम !
२०७३ असोज ३ गते १४:१५ मा प्रकाशित
रोशन राज भट्टराई
शुक्रवार मध्यान्ह एकाएक एउटा तस्बिरले खुबै चर्चा पायो । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचन्ड पत्नी सीता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछाडी गएर उभिदा नेपालको बेइज्जत भयो भन्ने कुरो आयो । एकपटक त मलाइ पनि हो कि जस्तो लाग्यो । नेपालका अधीकांश न्युज पोर्टलहरुले बेफिक्रीका साथ समाचार हाले ।
जसका हेडलाइन तथा तस्बिर यस्ता थिए । तस्बिरले सामाजिक संजालमा पनि खुबै चर्चा पायो । आलोचना गर्नेले यतीसम्म भने जसको बर्णन गर्न म असमर्थ छु । फोटोमा देखीएको दृश्यमा फोटो खिचेको समयमा टन्टलापुर घाम लागेको देखिन्छ । प्रचन्ड आफ्ना समकक्षी मोदीसँग हात मिलाउदै गर्दा उनकी पत्नी मोदीको पछाडी उभीएकी देखिन्छीन् । होचो कदकी प्रचण्ड पत्नी मोदीको छायामा परेकी छिन्। घामको किरणले उनको आँखालाइ चिम्सा पारेको देखिन्छ । (स्मरण रहोस अधिकांश नेपाली होचा छन र निधारले ढाकेको आँखाको आकार घामको प्रकाशमा ज्यादा खुल्न सक्दैन ।)
अपरान्हमा अर्को एउटा फोटोको चर्चा भयो । फोटोको चर्चा गर्ने क्रममा हाम्रा पत्रकार मित्रहरुले प्रचण्ड पत्नीलाइ बेसरम, बेइज्जती, अमर्यादित तथा अनेकानेक उपमा दिएका छन । फोटोमा देखीएको दृश्य (माथीको फोटोसँगै रहेको दाया तीरको फोटो) । फोटोमा प्रचण्ड भारतीय नेताहरु सिताराम यचुरी तथा डिकी त्रिपाठीसँग भेटघाटमा मस्त देखिन्छन्, एउटै सोफामा बसेका सबै नेताहरुको खुट्टा पसारिएका छन छेवैमा बसेकी प्रचण्ड पत्नी सीताका खुट्टा खुम्चिएका (उपर खुट्टी लाएका) छन् । समाचारमा यो फोटोलाइ अनेक एङलबाट जथाभावी व्याख्या गरेर आलोचना गरिएको छ ।
पहिलो कुरो त यो तस्बिर आलोच्य छदै छैन र दोस्रो कुरो यो तस्बिरको आलोचना गर्ने पत्रकारले पक्कै पनि महिलाको इज्जत तथा सम्मान गर्दै गर्दैन । कुनै पनि महिलाले पुरुषको अगाडी उपरखुट्टी लाउदा बेसरम, बेइज्जती हुनेको घरमा महिलाको कुन स्थान होला ? उनीहरुको अवस्था कस्तो होला ?
यो प्रसंगबाट अर्को के कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ भने हामी नेपालीहरु जुन समाजमा हुर्किरहेका छौ त्यो समाज अझैपनि पुरातनवादले जकडीएको छ । यसबाट उन्मुक्ति पाउन हाम्रा भावी पुस्ताले पनि उस्तै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामिले विभिन्न समयमा विभिन्न मुलुकका रास्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरुले विभिन्न मुलुकका भ्रमण गरेको देखेका छौ ।
उदाहरणका लागि तस्बिरमा :
विश्वकै शक्ति रास्ट्र अमेरिकाका रास्ट्रपतिको भारत भ्रमणमा अमेरिकाकी प्रथम महिला मिचेल ओबामा मोदीको पछाडि साइडमा (प्रचण्ड पत्नीकै लयमा ) बसेकी छिन् । प्रचण्ड पत्नी भन्दा ज्यादा मस्किएर र ज्यादा सामीप्यमा बसेर फोटो खिचाएकी (तपाइँको भाषामा) त्यो मिचेल ओबामा कति बेसरम होलीन् त हगी ? सङै रहेको अर्को तस्बिरमा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरून सङै मोदी तथा मोदिसँग मज्जैले मस्किएर हात मिलाइरहेकि क्यामरूनकी पत्नी समान्था छिन् । अब उहाँ पनि बेसस्कारी नै हुनुभयो । त्यस्ता शक्ति रास्ट्रका रास्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीका पत्नीहरुले पनि नजान्ने सस्कार हाम्रा मित्रहरुले कहाबाट जान्नु भयो कुन्नी !
(स्मरण रहोस् प्रचण्ड आइतबार स्वदेश फर्किसकेका छन् ।)
हामीले महिलालाइ कुनैपनि सस्कार तथा पुरातनवादको डोरीले बाध्नु हुदैन । यदि महिलालाई बन्धनमा राखिन्छ भने हामी पुरुषहरु पनि बन्धनमा रहन सक्नु पर्यो । यस्तो स्वतन्त्र पत्रकारिताको फिल्डमा रुढीवादले ग्रस्त मानिसहरुले समाजलाई पछाडी धकेल्न शिवाय अरु केहि योगदान दिन सक्दैन । एक महिलालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या तथा विभिन्न तर्कले दोषी देखाइ समाजको प्रतिनिधी पात्र बनाएर सम्पूर्ण नेपालीको इज्जतमाथी धावा बोल्नु एउटा जघन्य अपराध तथा निचताको पराकाष्टा हो ।